‘प्रदेश ६ लाई फिल्म उद्योगमा स्थापित गर्ने याेजना छ’ - PaschimNepal.Com
‘प्रदेश ६ लाई फिल्म उद्योगमा स्थापित गर्ने याेजना छ’
बिएस क्षितिज | प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस १, २०७३ 2:06:02 PM
दैलेखी कलाकार अबिषेक अनुराग दैलेखमा कुनै नौलो नाम होईन । बिगत १४ बर्ष पहिलेनै दैलेखी गीत संगीत पारखीको मन जितिसकेका थिए । प्रदेश नं. ६ लाई दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग जस्तै बनाउने लक्ष्य बोकेका उनले एक बारको चुम्वन र फुल टिपी लाईदेउकी निर्माया बोलका दुइ गीत हाईलाट्स नेपाल नामक युट्युव च्याईनल मार्फत बजारमा ल्याएका गायक अनुराग संग पश्चिमनेपाल डटकम सहकर्मी बिएस क्षितिजले गरेको अन्र्तवार्ता
यतिका बर्ष कता हराउनु भएको थियो ?
मलाई जिवनले म, कि तेरो रहर ? भन्यो । अन्तत्वगत्व मैले जिवन संग हारे अनि आत्म समर्पण गरे । मलाई कसै संग झुक्नु वा आत्मसमर्पण गर्नु दुवै मन पर्दैन । तर जिवनको उतार चढावले हराई दियो । समय पनि उसैलाई दिए अव भने मेरो रहरहरुलाई समय दिन्छु ।
कस्ता कस्ता गीत लिएर आउनु भएको छ ?
जम्मा दुई वटा गीत लिएर आएको छु । यउटा बिशुद्ध लोक लयमा आधारित “फुल टिपी लाईदेउन निर्माया” र अर्काे नाच्न रमाउन मिल्ने “एक बारको चुम्वनले मेरो प्यास मेटिदैन” भन्ने बोलको गिर रहेको छ ।
एक बारको चुम्वन जस्ता गीतले समाजमा के अर्थ दिन्छ ?
समाज गतिशिल छ । हामी २१ औ सताब्दिको यूगमा छौ । बिवरित लिंगी प्रतिको आकर्षणत प्राकृतिक नियम हो । त्यो प्रेम या यौन संग सम्वन्धीत हुन्छ । त्यहि भावलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको कामुक गीत मात्र हो र समय पनि आकर्षण र सौन्दर्य उन्मूख छ । प्रबिधिको विकासले समाजको विकास पनि त्यहि अनुरुप भईरहेको छ । मानिसहरुले चाहेर नचाहेर पनि यस्ता खाले गीत संगीतलाई हेरिहरनु भएको छ ।
फिल्ममा त यस्ता खाले सिन देखिन्थ्यो तर म्यूजिक भिडियोमा बढि भएन ?
त्यो त हो । यो गीतको लागि फिल्मबाट पनि अफर आएकै हो । मैले दिन चाहिन । गीतको बोलनै एक बारको चुम्वन भएकोले किस सिन राख्नु परेको हो । यो मेरो रहर होईन आवश्यकता हो । परिस्थिती कस्तो थियो भने करिव ४५ सय मिटर अग्लो हिमालमा चिसो सिरेटोले हानिरहेको बेलामा निकै असहज परिस्थिती थियो गीत हट भएकोले हट सिन अनिबार्य थियो । कठिनाईको वावजुत पनि टेक लिनु प¥यो ।
डर लागेन ?
अह ! लागेन बरु डर आम दर्शकको प्रतिक्रियामा छ । म मातिएको हाईन । मेरो स्टाटसले मातिन पनि मिल्दैन । निकै मिश्रीत प्रतिक्रिया आएको छ ।
यो गीतको सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ ?
संगीत बजारको एउटा बजार रात्री बजार पनि हो जहाँ डिस्का,रेष्टुरेन्ट,बार आदिहरुमा एस्ता गीतको महत्व हुने भएकाले पनि दर्शकमाझ लोकप्रिय हुन्छ भन्नेमा आशावादी छु ।
चलचित्र उद्योगको कुरा गर्नु भएको छ नी, त्यसको के सम्वन्ध ?
देश संघियतामा गई सकेको छ । सम्वन्धीत रज्यले आफ्नै क्षेत्रको कला संस्कृति संरक्षण गर्नु उस्को दायित्व हुन्छ । यस कुराको उठान हामी सम्वन्धीत कलाकारले गरियो भने असम्भव छैन । जस्तो उदाहरणको लागि सय बर्ष पुरानो वलिउड उद्योगलाई दक्षिण भारतिय चलचित्र उद्योगले उछन्न थालेको अवस्था छ । त्यसैले पनि हाम्रो क्षेत्रको कला संस्कृति,भाषा, साहित्य तथा पर्यटकिय क्षेत्रलाई समेत प्रर्वद्धन तथा बजारी करण गर्नका लागि म्यूजिक भिडियो मार्फत प्रयत्नरत छौ ।
आन्तमा आम पाठक तथा दर्शकहरुलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
धन्यवाद हजुरलाई यो बसाईको लागि । मैले हाईलाईट्स नेपालबाट बजारमा ल्यायको छु । पहिलो पटक दैलेखमा ४५ सय मिटरको उचाईमा छायाङ्कन गरिएको छ । प्राकृतिको मनोरम दुर्लभ दृश्य देख्न पाईने छ ।
गर्वको कुरा के छ भने दैलेखमा पहिलो पटक हामी दैलेखी कलाकारहरुले मिलेर बनाएको हुनाले पनि गर्व गर्ने ठाँउ छ । क्रिया पछि प्रतिक्रिया आउछ स्वभाविक हो । दैलेख बासी तथा दैलेखलाई माया गर्ने सम्पूर्णलाई यूवटुयुवमा गई Ek Bar Ko Chumban le, Ful Tipi Laaideuki टाईप गरि हेरिदिनुहुन र लाईक एवं सेयर गरिदिनुहुन अनुरोघ गर्दछु ।
बिएस क्षितिज Leaveacomment Cancel reply	Your email address will not be published.CommentName *